YouTube magaabay: Sida loo jar YouTube (FLV) Videos
Madaama aan ahay taageere video ah, mararka qaar waxaa laga yaabaa inaad doonayso in aad qabato qaar ka mid ah tafatirka fudud oo aad YouTube videos. Tusaale ahaan, waxaa laga yaabaa in aad u baahan tahay si ay u dhinto file a video YouTube galay files badan oo kala duwan ama kaliya iska jar clips rabin YouTube. In this article, waxaan soo bandhigi doonaa laba siyaabood in ay kaa caawiyaan in.
Qeybta 1: YouTube Video yaree la Desktop Video Editor
Qeybta 2: YouTube Video yaree la YouTube Video Editor
Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) waa YouTube magaabay smart, kaas oo awood kuu si ay u dhinto mid ka mid ah qaybaha YouTube video si loo badbaadiyo in mid ka mid file badan ama faylasha, muuqan oo aan khasaaro tayada wax. On top of in, waxaad codsan kartaa saamaynta video kala duwan hufay aad videos oo si toos ah mar kale geliyaan gal YouTube.
Weey wanaagsan tahay? Waxaa Download hadda iyo sida loo isticmaalo this magaabay YouTube si ay u dhinto aad YouTube videos.
Tallaabada 1. Import video YouTube aad rabto inaad ka jaray
Guji "Import" button in browser iyo xulo video YouTube deegaanka si ay u dajiyaan. Wakhtigan, waxaad ka heli doontaa file YouTube ah ayaa lagu daray aad album. Or ka dib marka aad hesho doonayay YouTube video kombiyuutarka, kaliya si toos ah u jiidin album this app ee. Markaas jiidi ah video YouTube ku daray ka album in ay Timeline ah.
Tallaabada 2. Iska yaree files YouTube
Double guji si loo muujiyo video YouTube ku Timeline. Jiid sare ee cas Time Tusiyaha iyo bar slider u wada in ay u guuraan Tusiyaha Time si ay u meel kasta oo video YouTube ah, ka dibna riix badhanka maqas ah. Fadlan ogsoonow: haddii aad uma muujin video ah adigoo gujinaya hor draging Tusiyaha Time ah, button maqas ah aan loo firfircoonaan.
Si aad u soo celiyaan hawlgalka kor ku xusan, waxaad jari karaa YouTube video clips galay. Marka aad ka shaqeeyaan cut, waxaad u baahan tahay riix batoonka top-bidix ee this YouTube video magaabay si uu u badbaadiyo mashruuca. Next, xulo qaybaha aan loo baahnayn oo guji badhanka Delete.
Fiiro gaar ah: Haddii aad rabto in aad badbaadin clip kasta YouTube in file fudud, aad dhoofin karaan mid ka mid YouTube clip mar kasta. Ka dibna mar kale iyo mar kale la furo Project badbaadiyey inuu ku celiyo shaqada delete iyo dhoofinta, si aad u hesho dhammaan clips YouTube ee files kala duwan.
Tallaabada 3. Dhoofinta video YouTube ah
Guji ee "Samee" button in arbushin ilaa uu suuqa kala Output, halkaas oo aad u baahan tahay in la garaaco tab Qaabka iyo doortaan qaab aad rabto inaad ka badbaadin file YouTube ee your computer disk adag. Ama waxaad dooran kartaa qalab button u badbaadin ee telefoonka gacanta, ama u gubato si DVD si toos ah adigoo gujinaya DVD, ama xataa mar kale la wadaagin ee YouTube.
Video Tutorial: Goo / goo / Split YouTube (FLV) Videos
Waxaad abuuray aad video u gaar ah, oo waxaa uploaded in YouTube, oo kaliya in ay ogaadaan in aad weli qaar ka mid ah tafatirka in la sameeyo, tusaale ahaan, jaray qaar ka mid ah qaybaha aan la rabin. Waxa aan aad u ogaataan waa in YouTube uu leeyahay qalab aasaasi ah oo tafatir dhisay ay website- YouTube Video Editor. Inkasta oo ay tahay aasaasiga ah, waxaa weli noqon kartaa mid waxtar leh. Halkan waa tilmaame fudud ku saabsan sida loo gooyay YouTube video la.
Iska yaree YouTube video
Jiid video eee waqtiga. Dul istaagin clip bartilmaameedka oo ka dhacay icon maqas si ay u dhinto clip ku burburi ah.
Dib u natiijada. Haddii aad tahay qof ku qanacsanayn natiijada, dhufatey "naadiya" badhanka si loo badbaadiyo goobaha.
> Resource > Beddelaan > Sida loo jar / goo / Split YouTube (FLV) Videos